Robbins, Tennessee, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Chris Or Misti
Le khabethe eseceleni, enokuthula ebheke izintaba kanye nechibi itholakala endaweni engamahektare angama-50 ongayisebenzisela ukuzijabulisa kwakho: ukuhlola, amasondo ama-4 noma ukudoba. Hlangana ne-Rustic oasis ku-"The Ridge" HUGE deck ebheke echibini futhi uphumule ngaphansi kwesibhakabhaka esivulekile sasebusuku !!! Ukubuka okuhle! Izilwane ezifuywayo zamukelekile :) futhi imali engu-$25 yesilwane esifuywayo izokhokhiswa uma unezilwane ezifuywayo ezingu-2, uma uletha izilwane ezifuywayo ezingu-3 kuzoba nemali engu-$50 yezilwane ezifuywayo.
Le khabethe eliseceleni, enokuthula ebheke izintaba ikumahektha angama-50 ongasetshenziselwa ukuzijabulisa kwakho: ukuhlola, amasondo ama-4 noma ukudoba. Le ndawo ingaphansi kwamamayela ayi-2 i-ATV ishayela phansi ngomgwaqo ogunyaziwe we-atv oya eBrimstone Recreational Area kanye neTrail 99.
Ikhabethe linompheme omkhulu phezu kokubuka ichibi elingu-1 acre elinezihlalo eziningi kanye nombono omuhle. Ichibi nezindlela ezikule ndawo kuyindawo evamile engasetshenziswa esinye isivakashi se-“The Ridge”.
Ikhishi lihlanganisa isiqandisi, ibhodwe lekhofi, imicrowave, amabhodwe namapani nezitsha.
Amashidi namathawula afakiwe.
Ikamelo lokulala liyisitezi esiphezulu esinombono omangalisayo wezintaba! Igumbi lokulala elingu-1 nebhavu elingu-1, kodwa ngizolala 6: 1 Umbhede ophindwe kabili, imibhede engamawele emi-2 kanye nombhede olala phansi nhlangothi zombili kanye nombhede ongu-2.
Ngeke ufune ukushiya leli khabethe uma usunyathele endaweni!
umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 umbhede wosofa, 1 usofa
4.88(216 okushiwo abanye)
4.88 · 216 okushiwo abanye
Kuseceleni, kumhlaba wamahektha angama-50, indawo yokupaka izimoto ezingama-700, ichibi eligcwele langasese
Ibungazwe ngu-Chris Or Misti
Wamukelekile ukuthi usishayele noma usithumelele imiyalezo nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwakho futhi sizojabula kakhulu ukukusiza :)
UChris Or Misti Ungumbungazi ovelele